News - Bandhigga Caalamiga ah ee daabacaadda iyo baakadaha ee Hong Kong
Bandhigga 7-aad ee Caalamiga ah ee daabacaadda iyo baakadaha ee Hong Kong waa madal ganacsi oo sumcad iyo dhif ah oo hal-joogsi u ah warshadaha. Waxay noqotay buundo muhiim ah iyo xarun isku xidha daabacaadda iyo baakadaha adeegga bixiya ee shirkadaha soo saarayaasha caalamiga ah, kuwa adeegga bixiya iyo ganacsatada. Halkan, bandhigyaashu waxay bixin doonaan xalal kala duwan oo daabacaad iyo xalal isugu jira, qalabkii ugu dambeeyay iyo qalabkii, iyo sidoo kale adeegyada saadka, iwm. Si ay u siiyaan iibsadayaasha dhammaan qaybaha nolosha ee u baahan daabacaadda iyo adeegyada baakadaha si ay u bixiyaan xulasho hodan ah oo xalal ah, shirkaduhu inay horumariyaan muuqaalka iyo soo jiidashada badeecadaha, taas oo kor u qaadeysa tartanka badeecadaha.
Carwada ayaa sifiican uheshay warshadaha, sida laga dheehan karo kororka joogtada ah ee tirada bandhigayaasha iyo iibsadayaasha. Laga soo bilaabo 2011, bandhiggu wuxuu soo jiitay in ka badan 320 bandhig oo ka kala yimid 8 dal iyo gobollo, oo ay ku jiraan Hong Kong, Mainland China, Germany, Korea, Philippines, Singapore, Thailand iyo Taiwan, oo matalaya koror 22.8% ah. Iyada oo gacan laga helayo ganacsigan caalamiga ah ee pudong ee ganacsiga iyo kobcinta, soo bandhigayaashu waxay la xiriiraan dadka isticmaala dhamaadka, wakiilada daabacaadda, daabacayaasha, soo saarayaasha, shirkadaha adeegga daabacaadda iyo baakadaha, dukaamada, naqshadeeyayaasha iyo shirkadaha wax soo saarka ee warshadaha kala duwan. Tirada iibsadayaasha ka soo qeybgalay sanadkii hore waxay ka badnaayeen 11,000, koror ah 6.4%, waxayna ka kala yimaadeen 109 dal iyo dhulal.
Baakadaha Hongbang mar labaad ayey u baxaan, iyagoo wajahaya adduunka, oo wajahaya qof walba. Kaliya inaan ku siiyo adeegga ugu xirfad iyo alaabada ugu tayada sareysa. Wax soo saarkeenu wuxuu daboolayaa cuntada, kiimikooyinka maalinlaha ah, dawooyinka, agrochemicals, elektaroniga, qalabka dhismaha iyo meelaha kale. U heellan xakamaynta tayada adag iyo adeegga macaamiisha ee fikirka leh, xubnaheenna khibrada leh ayaa had iyo jeer diyaar u ah inay ka wada hadlaan shuruudahaaga oo ay hubiyaan qanacsanaantaada. Hadday amarkaagu yar yahay ama weyn yahay, fudud yahay ama dhib badan yahay, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto. Adeeg wanaagsan iyo tayo qanacsan ayaa had iyo jeer kula socota.